Harki Hanna Bare Dooluutu Sossoha (Ibsa ABO) Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHarki Hanna Bare Dooluutu Sossoha (Ibsa ABO)
Harki Hanna Bare Dooluutu Sossoha (Ibsa ABO)
(#Ibsa_ABO – Fulbaana 14, 2019)
Kamisa Fulbaana 12, 2019 galgala Waajjira Poolisii magaalaa Buraayyuu irratti boombiin darbatamee miidhaa namoota irraa gahe jechuudhaan gochaa kanas (kallattiidhaan maqaa dhawuu baatanis) ABO.dhaan wal qabsiisanii oduun dabballoota ODP/EPRDF.iin tamsa’e ololuma maqa-balleessii baroota aangoo EPRDF guutuu itti hojjetamaa ture dha. EPRDF baroota aangoo isaa hunda lammiilee biyyattii kanneen sirna Abbaa irrummaa isaa mormanii mirga ofiif falmatan dharaan yakkuuf gocha fokkataa akkanaa oggayyuu irra deddeebiidhaan raaw’achaa jiraate. Manneen jireenyaa namootaa, manneen ciisichaa (doormii) barattootaa, manneen nyaataa – dhugaatii fi hoteelota, konkolaattota geejjibaa fi … kkf. keessa dhuka’aa fi meeshaalee lolaa adda addaa kaa’uun, yookaan Alaabaa #ABO kaa’uudhaan namoota yakkamoo fakkeessuu barbaadan ittiin tohannoo jala oolchuuf ykn. miidhaa irraan gahuuf fiilmiin sobaa hojjetamaa ture kan himamee dhumu miti.
Miidiyaa mootummaa/ODP irratti oduun gadi dhiifame kanneen balaa boombii sana geessisan abalufaa dha jechuudhaan qaamota yakkamoo fakkeessuu barbaadan eeree namootni shakkamanii tohannoo jala oolfaman jiraachuus ibsa. Gama biraatiin ammoo qondaalli mootummaa (Bakka bu’aan hoogganaa Communication Commission Poolisii Oromiyaa) Komaander Haayiluu Fiqaaduu qaamni balaa boombii kana geessise eenyu akka tahe akka hin baraminii fi namni dhimma kanaan wal qabatee tohannoo jala oolfames akka hin jirre Jimaata Fulbaana 13, 2019 BBC.tti himan. Oduu wal-dhawaa kana irraa wanti hubatamu akkuma olitti ibsame gochaan kun fiilmii dharaa kan namoota nagaa daba EPRDF morman ittiin miidhuuf ykn. tohannoo jala oolchuuf tolfame akka tahe dha.
Addi Bilisummaa Oromoo erga waggaa tokko dura mootummaa Itoophiyaa wajjin wal-tahiinsa irra gahee hoogganni isaa ol’aanaan Finfinnee seene irraa kaasee karaa nagaa sossohee Kaayyoo qabsoo isaa galmaan gahuuf kan isa irraa eegamu hunda gochaa jira. Gama ODP/EPRDF.tiin garuu ejjennoon inni ABO fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti qabu kan duraanii irraa jijjiirama/wayyoomina agarsiisuu dhabuun kan nu gaddisiisuu fi nu yaaddessuu dha.
Ittiiqaa Tafarii – Tolen Jedhu – New Ethiopian Oromo Music 2018 (Official Video)
Ibsa Eejjannoo Qeerroo Burrayyuu irraa!!!
Dargaggoo Lataa Guutaa mana hiraarsaa Maa’ikeelaawwii keessatti giddirfamaa fi hiraarfamaa ture.